Terms | Mytrickstips
musha // Mitemo
MITEMO YEBASA - TOS
Ndapota verenga 'Mitemo Yebasa' nokungwarira usati watanga webhusaiti yedu. Nokusvika kana kushandisa shanduro yedu, iwe unotipa mvumo yako yekugovera uye kushandisa shanduko yakatumirwa kunzvimbo yedu newe. Sezvakaenderana nemitemo yebasa redu, iwe uri 'kubvumirana' uye 'kubvuma ' kune aya mazwi achishandisa webhusaiti yedu mune chero nzira.
Nzvimbo yedu yepaIndaneti inogona kuva nehuwandu hwekubatana kune zvikamu zvechitatu. Isu hatisi zvakananga nemamwe mawebsite. Uyezve, zvinhu zvose uye logos zvinobatanidzwa ndizvo NOT rakapiwa uye rakarongedzwa nesu. Izvo uhu uye hutungamiri hwehutano hwepfungwa ndehwevadzidzisi avo. Hatifungi nezvemabasa maererano navo.
Hapana chikamu chebhuku rewebhu redu rakagadzirirwa kupa chero rudzi rwekukurudzira kana zvikwangwani. Hatisi kuzova nemhosva yemhando ipi neipi yekukuvadza iwe kana bhizimisi rako semugumisiro wekushanyira kana kushandisa shanduro yedu chero chinangwa. Isu hatisi kujekesa chero chipi zvacho chakataurirwa kana chinoreva nokuda kwemashoko nemashandiro atinopa panzvimbo yedu.
Tinochengetedza kodzero yekugadzirisa chero kusakarurama kwezvakanyorwa pane webhusaiti yedu pasina kupa chero chiziviso chekutanga. Hatisi nguva dzose tine chokwadi chekuti zvikanganiso zvichagadziriswa pakarepo. Uyezve, hatisi kuvimbisa kuti webhusaiti yedu ichawanikwa panguva dzose. Izvo zvinyorwa panzvimbo yedu yepaiti haisi mutemo-bhuku uye hazvifaniri kutaridzirwa semutemo, mari, kana rubatsiro rwechiremba. Zvinyorwa zvinoparidzirwa ndezvechinangwa chekuziva chete uye kwete kubatsiridzira kuongororwa kweunyanzvi.
Iwe uri kushandisa webhusaiti yedu iwe pachako pangozi. Hatisi mhaka yemigumisiro chero ipi zvayo inogona kubuda kunze kana maererano nekushandiswa kwemashumiro edu kana webhusaiti mune chero nzira kana nenzira. Inusus 100% yako kunyange kana sangano redu rave rakanyatsorongedzwa nezvekurasikirwa kunogona. Unobvumirana NOT kuti tiite mhosva pamusoro pemhando ipi neipi ye kurasikirwa, kukuvara, kana zvikwereti pane chero mamiriro ezvinhu, ingave yakananga, isina kutarisana, kana yakakosha.
Kunyange zvazvo kuedza kwose kuri kutorwa kunovimbisa kuti ruzivo rwepawebsite yedu rwakarurama, hatirevi kururamisa kwaro kana kukwana. Hapana mubhuku rekutsvaga kwewebsite ino; (a) Rongedza kana kusabvisa iwe kana mutoro wekukuvadza kwako kana kufa kunokonzerwa nekuregererwa. (b) Chengetedza kana kusabvisa iwe kana mutoro wekunyengera kwemhando ipi zvayo. (c) Chengetedza kana kusatora iwe kana chedu chedu pane chero chipi zvacho chisingabvumirwi nemutemo. (d) Rongedza kana kusabvisa iwe kana dare redu risingagoni kubviswa pasi pemutemo unoshanda.
Isu tinopa mazwi edu ekushandira chete muchiChirungu. Nokushandisa webhusaiti yedu, unobvuma kuti Terms of Service yakagadziridzwa nesu isu tinonzwisisa. Kana iwe usingabvumirani, unorayirwa kusashandisa webhusaiti yedu. Pasinei nemamiriro ezvinhu, iwe unofanira kuramba uchishandisa shanduro yedu kana iwe usingabvumirani nemashoko ose ebasa akarondedzerwa nesu.
Sekuzvimiririra uye zvisingakwanisi kuita chimwe chinhu, tine kodzero dzose dzokudzivirira nekudzivirira zvikwereti zvedu zvemunhu oga. Saka, rangarira kuti unoshandisa sei webhusaiti yedu. Semamiriro ekushandisa, iwe unobvuma kuti haungauyi nezvemhosva kune webhusaiti yedu kana vashandi vedu kune chero chikwereti kana kukanganisa iwe unogona kutambura maererano nekushandiswa kwewebsite yedu. Pakati pemitsetse yakafanana, unobvumirana kuti Mitemo yeBasa iri ruzivo rwakakwana mumaoko ako kugamuchira kuti yedu yebhuku rekuzvidzivirira ichadzivirira isu uye vashandi vedu pane zvese zvinopomerwa zvakatipomera.
Kana chero chikamu chekutsvaga kwewebsite yacho chisingawirirani nemutemo unoshanda, hazvizokanganisa kushanda kwemashoko ebasa anotsanangurwa peji ino. Uyezve, tinozvidzivirira zvose zvinokonzerwa nemamwe mapeji epakati anobatana nesu nenzira ipi zvayo. Tinoshanda sepakati-murume kupa mvumo dzekusununguka kune vashanyi. Isu hatisi kuwirirana zvakananga kana kubatanidzwa nemumwe wehupfumi hwemasangano echitatu.
Masangano edu ehurukuro / ruzivo rwakapiwa "AS IS" pasina chero waranti kana tambo dzakabatanidzwa. Saka, hatirevi kuti mhinduro yakapiwa nesu ichashanda nguva dzose. Tinoda kukupai zvipo zvepachena mahwendefa, asi isu hatigoni kuvimbisa kuti code ichashanda 100% yenguva. Uyewo, unofanirwa kubvumirana kuti upedze matanho anodiwa kuti usvitse code, iyo inogona kukuda kuti upedze kuongorora mune dzakawanda. Kune zvakanakisisa zvatinokwanisa, tinoedza kupa "hapana mari" yeongororo, asi inyika-yakasarudzwa. Saka, mari ipi neipi yakabatana neongororo haina kuwira pasi pemasimba edu.
Tine simba rekuita shanduko kune "Mitemo yeBasa" panguva ipi zvayo musati maona. Ndiro mutoro wemushandi wekuenderera mberi nekuchinja kwezvino. Mushandi achawana maitiro akavandudzwa nemamiriro ezvinhu peji rino. Kana uine mamwe mimwe mibvunzo pamusoro pemitemo yebasa pa webhusaiti yedu, usanzwa wakasununguka kuti utitane nesu.